Sina SEBIC 20 mirefy kodiarana matavy 500w bisikileta bisikileta ary mpanamboatra motera | Funncycle
SEBIC 20 mirefy Kodiarana matavy kodiarana moto elektrika 500w
Fikojakojana ambany sy fisehoana fohy. Ary ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra dia miorina tsara miaraka amina fotony mafy sy maharitra ary afaka manohana lanja mavesatra 100KG. Ny jiro aloha sy ambadika any aoriana ary ny fiarovana avo lenta tsy miovaova dia azo antoka fa misy fepetra.
Haben'ny kodiarana 20 ″
maotera Tsy misy borosy, Mag Wheel 500W / 750W
filanjana 20 * 490MM, firaka aliminioma
Fork 20 ″ Alika Fork, fampiatoana
notapahiny Double Disc novakiny
kodiarana 20 * 4.0
Gear Set hafainganam-pandeha
Bateria Lithium Battery 48V
miseho LCD Display
Mijanona mahery, mijanona mangatsiaka- Volavola mifangaro mifangaro izay fikojakojana ambany sy fisehoana fohy. Ary ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra dia miorina tsara miaraka amina fotony mafy sy maharitra ary afaka manohana lanja mavesatra 100KG. Ny jiro aloha sy ambadika any aoriana ary ny fiarovana avo lenta tsy miovaova dia azo antoka fa misy fepetra.
TSARA sy Haingana- Moto herinaratra miisa 500W-1200W mamela azy io haingam-pandeha sy hianika moramora. Ny bateria 48V 17.5Ah Li-ion dia manome ny hafainganam-pandeha 21 MPH ary elanelana lavitra hatrany amin'ny 50 kilometatra aorian'ny famerenana iray hetra feno.
MAHAFINARITRA & SAFETY- Ny freins hidina vita amin'ny hidy miaraka amina fanapahana tànana dia hampiadana na hampiato anao amin'ny fotoana rehetra, miaraka amina seza lehibe ahazoana aina, eo anoloana sy aorinan-kibo tanteraka, fampiatoana fork aloha, 20 × lehibe kokoa sy fanoherana. Kodiarana 4.0 santimetatra izay manome tanjaka matanjaka sy fitoniana, ny mitaingina dia sady milamina no mampientam-po. Ny hazavana eo anoloana dia mangatsiatsiaka sy lafo vidy, hazavana avy any aoriana hametraka anao ho azo antoka kokoa.
FAMPANDROSOANA ACCESSORIES tafiditra - Afa-tsy ny bisikileta elektrika dia azonao atao ny misafidy ny manampy mpitatitra aoriana izay afaka mandray ny valizinao sy ny takelaka misy anao any aoriana.
Teo aloha: Sarany fihenam-bidy - bisikileta mandeha amin'ny herinaratra mora vidy - SEBIC enduro afovoany miakatra ebikes an-dalambe môtô - Funncycle
Manaraka: Moto SEBIC New Style Central Suspension 16 Inch bisikileta mandeha amin'ny kodiarana iray
Seza bisikileta Cruiser